Wyze Watch Pre Order: Ahoana no hividianana torolàlana? - Fitaovana
Ny famantaranandro Wyze dia saika havoaka amin'ny Febroary 2021 ary hitranga amin'ny taona ho avy io. Wyze dia namorona marika hatrany ho iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana an-trano manan-tsaina indrindra hatramin'ny nivoahan'ny vokatra voalohany avy tao amin'ny trano bongo.Miaraka amin'ny fahombiazan'ny varotra tarika Wyze, dia vonona ny mpamokatra handefa ny fiambenana Wyze ho vokatra vaovao.
Efa mamorona savorovoro eo amin'ireo bilaogera sy mpankafy teknolojia mahay noho ny fisehoan-javatra mahavariana sy ny famaritana azy io.Tsy ity vokatra ity ihany no toa mahavariana, fa lasa mpifaninana mivantana ho an'ny Google Fit sy Apple watch, ary mieritreritra hoe- $ 20 fotsiny no vidinao hividianana an'ity vokatra ity ary mila mividy an'ity vokatra ity ianao.
Nintendo Switch 2 - Daty famoahana & famoahana
Inona no atao hoe Wyze Watch?
Raha efa sendra ny tarika Wyze ianao dia tonga eto ity vokatra mahatalanjona ity hanentanana anao indray. Ny famantaranandro Wyze dia novolavolaina mba hanome anao vahaolana feno amin'ny fanarahana ny fanatanjahan-tena ary koa mitady fitiliana sy serivisy maro hafa.
Tsy maintsy ho raiki-pitia amin'i Wyze ianao ary tonga ny fotoana hanafarana mialoha! Ny fiambenana Wyze dia miaraka amina sehatra mitambatra izay misy Apple Health ary Google fit. Miaraka amin'izany, ny fiainana bateria mahavariana sy ny foto-kevitra mahira-tsaina dia izay rehetra tianao hananana.
Raha manontany tena ianao ny amin'ny fomba ahafahanao manafatra mialoha ny fiambenana Wyze, ity torolàlana ity dia izay rehetra tadiavinao. Ka tsy misy hatak'andro, andao hanomboka izany.
Wyze Watch Fomba famaritana feno:
Fijerena 44 mm
miseho 1,75 TFT LCD 1.4 TFT LCD
vahaolana 320 x 385 320 x 320
Weight 46,5 g 40 g
Fiainana bateria 9 Andro 9 Andro
Fahafahana bateria 300 mAh 250 mAh
Fotoana famakiana 2.5 Hr 2.5 Hr
Azo antoka ve ny fampiasana WYZE?
Ny fiambenana Wyze dia miaraka amin'ny vatana mahatalanjona ary mihalehibe. Amin'ny lafiny rehetra dia voaro izy io mba hisorohana ny hamandoana ary hiasa tsara ny sensor rehetra. Tonga soa aman-tsara, andao hiresaka lafin-javatra maro izay mety hitranga.
Ny fehy dia tsy tsara indrindra any an-dakilasy raha ny resaka famokarana. Na izany aza, manintona izy ireo ary natsangana haharitra. Ankoatr'izay, afaka mahazo loko maromaro ianao hisafidianana.
Izy io dia miaraka amin'ny naoty IP68 tsy misy rano. Io no fenitry ny ankamaroan'ny fitaovana elektronika raha ny amin'ny natiora tsy tantera-drano.
Manerana ny vatana dia mendrika amin'ny alim-bolan'ny alimina amin'ny lafiny rehetra. Manakana ity vokatra ity handrava izy ireo raha toa ka milatsaka tsotra izao ny fiambenan'i Wyze.
Ahoana no hametrahako ny famantaranandroko WYZE?
Ny fiambenana Wyze sy ny tarika Wyze dia natao tamin'ny sehatra mitovy amin'izany. Azonao atao ny manantena fa samy hanana ny fizotrany sy ny làlan'ny fananganana izy ireo. Ireto misy dingana vitsivitsy azonao harahina hananganana ny fiambenana Wyze.
Ampidino amin'ny findainao ny fampiharana Wyze ary apetaho avy eo. Raha vantany vao vita, tsindrio ny fitaovana Add. Eto ianao dia hahita an'i Wyze mijery. Tsindrio fotsiny ity.
Tsy maintsy manana fahefana amin'ny famantaranandronao Wyze ianao izao. Mba hanaovana izany dia ampifandraiso amin'ny charger ity famantaranandro ity ary kitiho ny bokotra herinaratra. Hivadika ho azy izy io. Andraso ny fanekena ny tarikao.
Aorian'io dia hangataka anao hampifangaro ny famantaranandronao Wyze ny fampiharana. Hahita pin 4-isa miseho eo amin'ny efijery fijerinao ianao. Tsindrio ity efijery ity ary avy hatrany ny fampiharana finday dia hampiseho tenimiafina 4 mitovy.
Tsindrio ny fitaovana findainao ary avy eo dia hanomboka ny fomba pairing. Mety handany fotoana amin'ny fampiharana ilay izy. Mila miandry fotoana fohy ianao. Raha vantany vao manomboka miseho ho toy ny 'Hamafiso', avelao ny tanananao hiala amin'ireo fitaovana roa ireo. Ny famantaranandronao Wyze dia namboarina izao hampiasana azy tanteraka.
Endri-javatra amin'ny Wyze Watch:
1. efijery mikasika
Ny habeny dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny resaka famantaranandro marani-tsaina. Ny fananana fisehoana ahazoana aina miaraka amina endri-tsoratra matevina dia mora kokoa aminao ny manamarina ny menus sy ny toerana misy anao. Ny mpanamboatra dia nilaza mazava momba ny fanaovana an'ity fitaovana mahavariana ity. Ny fiambenana Wyze dia misy modely roa samihafa. Ny iray amin'izy ireo dia miaraka amin'ny efijery 1,75-inch raha ny iray kosa miaraka amin'ny fisehoana efijery 1.4-inch. Azonao atao ny mahazo fampisehoana an-tsisiny ho azy roa.
2. Oxygène amin'ny ra
Ny haavon'ny oxygen oxygen dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny tsy fifandanjana kely amin'ny haavon'ny ôksizena amin'ny ra dia mety hiteraka olana lehibe ihany koa. Noho ny fanampian'ity endri-javatra ity dia azonao atao ny manantena ny rafitra fanaraha-maso oksizenina ra 24 x 7 mitohy. Miaraka amin'ny fanaraha-maso mitohy, ity fitaovana ity dia ahafahanao mahazo valiny marina ary mandefa fanairana amin'ny rindranasao isaky ny misy fiovaovan'ny haavon'ny oxygen.
3. Vatana milay
Endri-javatra iray izay mahatonga ity vokatra ity hahagaga ny fananganana sy ny rafitra mendrika. Izy io dia miaraka amin'ny vatana metaly rehetra izay mahafinaritra ny mijery azy koa. Mba hanatsarana ny endrika dia ahitana fampiononana maivana izy io hahatonga ity vokatra ity ho voajanahary mahavariana. Izy io dia tonga amin'ny famolavolana vy rehetra ahafahanao mitondra an'io finday io any ivelany. Ny firafitry ny firaka aliminioma 6061 dia vao mainka mampiavaka azy. Ankoatr'izay, azonao atao ihany koa ny manavaka ireo tadiny sy ny tadiny.
4. Fanoherana rano
Ny fanoherana ny rano dia nanjary singa manan-danja amin'ny famantaranandro marani-tsaina rehetra. Izy io dia mendrika hanomezana safidy ny fanoherana rano. Ity vokatra ity dia afaka mitazona fanoherana hatramin'ny 2 metatra ambanin'ny rano. Ny fe-potoana voafetra ho an'ny fisehoan'ny fanoherana rano dia manodidina ny 30 minitra. Azo antoka fa tsy milamina aminao mihitsy ny milomano miaraka amin'ity tarika ity.
5. Ny tahan'ny fo
Tsy misy mpanara-maso hetsika mety hanampy raha tsy manana sensor fitiliana fitepon'ny fo ao ianao. Soa ihany, ity fitaovana ity dia misy iray ary mahatalanjona ihany koa ny fampiasana azy. Ny mpanara-maso ny tahan'ny fo amin'ny fiambenana Wyze dia mahatalanjona ary miasa foana izy io. Raha te hanara-maso ny valin'ny fitempon'ny fonao dia afaka manokatra ny rindranasa Wyze mora foana ianao ary mijery azy. Mitovy amin'ny fanaraha-maso ny tahan'ny fo, azonao atao koa ny mahazo endri-javatra toy ny dingana ary koa ny fanaraha-maso ny torimaso. Tena ilaina daholo izany rehetra izany.
6. Fiainana bateria
Zava-dehibe iray hafa tian'ny olona rehetra manana ny fiainana bateria mahagaga. Raha resaka fiambenana Wyze, dia mialoha lavitra ny ankamaroan'ny smartwatches hafa misy eny an-tsena ankehitriny. Mazava ho azy fa misy olona te hampiasa an'ity vokatra ity satria manome maharitra 9 andro ny fiainana bateria. Izy io dia ampiasain'ny bateria 300 mAh izay maharitra ela kokoa noho ny hafa. Ankoatr'izay, ny fotoana iampangana an'ity bateria ity dia ambany ihany koa ary manodidina ny 2,5 ora.
Tombontsoa sy lafy tsaran'ny Wyze Watch:
Izy io dia mifanaraka amin'ny Alexa sy Google
Miasa mora amin'ny Google Fit sy Apple Health
Ny fanamboarana vatana dia kalitao mahatalanjona
Izy io dia miaraka amin'ny fisehoan'ny efijery Touch
Afaka mahazo naoty IP68 Waterproof ianao
Ny bateriadia mahatalanjona miaraka amin'ny fanohanan'ny 9 Andro
Ny fehy dia tsy tsara kalitao
Ahoana ny fomba hanafarana mialoha ny fiambenana Wyze?
Ankehitriny ianao vonona ny hividy famantaranandro Wyze vaovao, dia azonao atao ny manaraka fotsiny ireo dingana etsy ambany. Amin'izao fotoana izao, ity famantaranandro ity dia mbola tsy misy amin'ny tranokala E-Commerce marobe. Tsy maintsy mandeha any amin'ny pejy ofisialin'ny Wyze ianao raha hanafatra.
Sokafy ny browser-nao ary avy eo mankanesa any amin'ny tranokala ofisialin'i Wyze. Azonao atao ny mitady ny fiambenana Wyze eto. Raha tsy hitanao io dia tsotra Kitiho eto .
Hanana safidy ianao hisafidianana fiambenana Wyze roa samy hafa miaraka amin'ny haben'ny efijery samihafa rehefa misy. Na 47 mm na 44 mm izy ireo. Tsindrio ny bokotra radio eo akaikiny ary avy eo mifidiana fehin-loko. Na izany aza, tsy voatery io. Vantany vao vita dia safidio eto ny takelaka Pre order.
Ny famantaranandronao vaovao dia nampiana amin'ny karatra fiantsenana. Kitiho ny rohy fiantsenana ary hanokatra takelaka vaovao izy. Mitadiava vakizoro ankavanana ary safidio ny Firenenao. Ampidiro kaody fanjakana sy kaody. Raha manana kaody promo ianao dia ampiharo, ary avy eo mandrosoa mandoa.
Azonao atao izao ny mampiditra ny antsipirihanao manokana ao anatin'izany ny adiresy faktioranao sy ny hafa. Ampidiro ny antsipiriany momba ny karanao ary hamafiso ny vola aloanao Vantany vao vita izany dia hahazo mailaka fanamafisana avy amin'i Wyze momba ny pre-order anao ianao. Tonga ao an-tranonao izy io aorian'ny febroary 2021.
Wyze Watch vs Apple Watch vs Samsung Watch Fampitahana:
Tsara kokoa noho ny Wyze Band i Wyze?
Wyze watch dia vokatra mahatalanjona ampiasaina raha tianao ny hampiasaina amin'ny fampiasana mahazatra anao. Mazava ho azy, misy fahasamihafana eo amin'ny tarika marani-tsaina sy ny famantaranandro. Misy endri-javatra marobe ao amin'ny famantaranandro Wyze toy ny fampandrenesana, fanaraha-maso an-trano feno fahendrena, ary ny hafa izay tsy ho azonao amin'ny tarika marani-tsaina. Na dia kely aza ny vidin'ny fanombohana ny fiambenana Wyze dia vokatra tsara hananana amin'ny fanarahan-dia ataonao sy amin'ny fampiasana isan'andro.
Tokony Hividy Wyze Watch ve Ianao?
Ny fiambenana Wyze dia mitondra saika ny endri-javatra rehetra notadiavinao hananana amin'ny rindrambaiko finday. Miaraka amin'ny endri-javatra toy ny fanarahana hetsika ary koa ny fanarahan-dia ny fitepon'ny fony, dia fitaovana tsara hananana trano izany.
Raha heverinao ho zava-dehibe ny vidiny, dia mihena ny vidin'ny famantaranandro Wyze noho ny famantaranandro Samsung na Apple Watch. Ankoatr'izay, ireo fiasa azonao toy ny fanaraha-maso an-trano feno fahendrena dia tena mahavariana ary koa ny filalaovana match. Izy io dia misy amin'ny habe roa samy hafa ary ny maka ny iray amin'izy ireo dia safidy tsara hananana.
Raha ny hevitro, ny fiambenana Wyze dia fividianana marani-tsaina ho an'ireo olona izay mitady vahaolana mora teti-bola ary hahazoana fidirana feno.
Wyze watch dia vokatra mahatalanjona anananao. Misy fiasa marobe miaraka amin'i Wyze izay tsy azonao hadino fotsiny. Ny fijerena voalohany ny fijerin'ny olona mafana fo dia milaza fa ny mpijery Wyze dia mpifaninana mivantana amin'ny Apple na Samsung smartwatches. Na izany aza, ity vokatra ity dia manana tombony mahavariana amin'ny fananana vidiny ambany. Ireo endri-javatra ho an'ireo vokatra telo ireo dia mitovy ihany, saingy misy endri-javatra fanampiny izay azonao esorina tanteraka.
Izaho manokana dia te-hanafatra an'i Wyze eo noho eo. Maninona no miandry lavitra kokoa an'ity fitaovana ity raha afaka mandeha haingana amin'ny tranokala ofisialy sy manafatra mialoha izao ianao? Faingàna alohan'ny hikatonan'ny tahiry mialoha ny baiko.
Headphones tsara indrindra ho an'ny iPhone 12
Ahoana ny fomba hamantarana ny AirPods sandoka Pro? Tokony Hividy ve ianao sa tsia?
mametraka chrome cast amin'ny laptop
izay kissanime no mety
ny fomba famolavolana akanjo roblox
mandefa sarimihetsika vaovao an-tserasera maimaim-poana nefa tsy misintona
ampitahao hulu amin'ny tv youtube